Widget-ka sidoo kale waxaa dib loogu qaabeeyey MacOS Sierra | Waxaan ka socdaa mac
Widgets-ka sidoo kale waxaa loo naqshadeeyay MacOS Sierra
Imaatinka macruufka 10 waxaan aragnay naqshadeynta isdhexgalka dhinacyada badan iyo barnaamijyada nidaamka. Waan la yaabay in Apple ay go'aansatay inay sii wado daaqada Mac-da iyo ogeysiisyada sanadkaan, hadii ay ku badaleyso nidaamyadooda mobilada. Hagaag, ugu dambayntiina iyagaa wax ka beddelay iyaga iyo ayaa ku habboon iyaga ka dib qaabeynta nooca ugu dambeeyay ee macruufka.
Waxaan kuu sheegay in nidaamka qalliinka desktop-ka uu maalin walba aad ugu eg yahay mobilada, waana. Aynu hoos ku aragno waxa uu daaqadda cusubi u eg yahay iyo waxa tan macnaheedu noqon doono iyada oo ay weheliyaan cibaaro kale oo loogu talagalay MacOS.
1 Widget cusub iyo ogeysiisyo loogu talagalay MacOS
2 MacOS waxay leedahay sheeko cusub oo muuqaal ah marka lagu daro widget
Widget cusub iyo ogeysiisyo loogu talagalay MacOS
Waxaan ka soo gudubnay isweydaarsigii caadiga ahaa iyo kii mugdiga ahaa oo gebi ahaanba dib loo naqshadeeyay. Hadda muuqaalku waa caddaan, taas oo siinaysa cod aad u kala duwan. Mashiinka loo yaqaan 'widgets' mabda 'ahaan waa isku mid sidii aan horey u ahaan jirnay, laakiin si tartiib tartiib ah ayey u soo hagaagayaan. Sidoo kale waa fursad dahabi ah oo lagu kobciyo dukaanka codsiyada Apple, Mac App Store. Horumariyayaashu waxay hore ugu abuuri jireen wijigooda barnaamijyadooda, laakiin hadda way ka sii yaab badan yihiin oo qaabkani wuxuu ku helayaa faa'iido iyo soo jiidasho dadka isticmaala kuwaas oo aad u sii isticmaali doona.
Ogeysiisyada ayaa ah dhinaca kale ee lacagta, ama halkii, daaqadda. Iskuxirkii madoobaa wuu baaba'aa kii cadna waa la muujiyaa. Waxaan raadiyay hab ama ikhtiyaar ikhtiyaarrada ah si aan uga dhigo madow, sida dekedda ama menu, laakiin lama sameyn karo. Waan jeclahay qaabka cusub, laakiin halkaas waa inaan ku raacsanahay dadka isticmaala ee ka cabanaya sameynta. Caddaanka cad ayaa jooga. Malaha mustaqbalka waxay dhigi doonaan hab mugdi ah sida kan Apple TV ama midka bilaabay in lagu arko macruufka 10-ka. Waxaad ka jawaabi kartaa ogeysiisyada oo aad tirtiri kartaa. Waxaa loo sameeyaa si la mid ah sida macruufka. Ficil ahaan waa nuqul nuqul buuxa ah.
Waxay ku sameeyeen si la mid ah Siri. Gudaha gudaheeda waxay ku qasbanaan lahaayeen inay buundooyinkooda samaystaan ​​oo horumariyaan oo qoraan lambarro badan, laakiin muuqaal ahaan, markaad dhaqaajiso, waxaad arkaysaa inay dhab ahaan la mid tahay macruufka. Daaqad ayaa furan oo gudaheeda ah Waqtiga ama barnaamijka lagama maarmaanka u ah fulinta dalabyadeena iyo ka jawaabida su'aalahayaga ayaa furmaya. Way waxtar leedahay wayna shaqaysaa si weyn, waxaan leeyahay uun muuqaal ahaan waa la mid.
MacOS waxay leedahay sheeko cusub oo muuqaal ah marka lagu daro widget
Isticmaalayaashu kuma noolaadaan oo keliya waxyaabaha loo yaqaan 'widgets'. Marka hore, waxaan ka faalloon karaa in gidaarka gidaarka ee MacOS uu yahay mid cajiib ah. Waxay umuuqataa doqon, laakiin markaan arkay kadib cusboonaysiinta waxay umuuqatay kombuyuutar cusub. Markii hore waxaan moodayay in kombiyuutarku xoogaa burburi doono oo lagu buuxin doono cusbooneysiintan laakiin si fiican ayuu u shaqeeyaa. Uma imanayso inay hoos u dhigto Mac, laakiin in lagu daro xoogaa horumar ah oo la hagaajiyo oo kor u qaada nidaamka. Iyo ku dhowaad guul darrooyin, maxaa yeelay wax waliba si fiican ayey u shaqeeyaan. Siri, widget cusub iyo ogeysiisyo, interface cusub iyo shaqooyin waxtar badan oo wax ku ool ah maaraynta keydinta. Taasi waxay ku siineysaa xitaa talooyin, muuqaal ahaanna waa mid soo jiidasho leh.
Fiidiyowyada ma ahan oo keliya barnaamijyada laakiin sidoo kale Safari waxaa laga daawan karaa Sawirka iyo Sawirka, si aad ugu daawatid iyaga oo raaxo leh sida xumbo sabaynaysa. Daaqadaha barnaamijyada iyo barnaamijyadooda si fudud ayaa loo maamuli karaa oo isbeddelo kale ayaa lagu soo daray. Taladayda: Inaad sida ugu dhakhsaha badan u cusbooneysiiso. Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan mana jiraan wax war ah oo soo baxay oo sheegaya in ay ka tegeyso qalabka aan la isticmaali karin ama wax la mid ah. Xitaa haddii ay tahay oo kaliya in la tijaabiyo Siri, waan cusbooneysiiyay, iyo in kooxdayda shaqadu ay tahay iPad Air 2.
Microsoft waxay awood u yeelan doonaan inay ku faanaan wax badan oo ka mid ah Meelaha ay maraan iyo shaashadooda taabashada, laakiin nidaamka ugu fiican uguna qurxoon nidaamka hawlgalka waa MacOS. Waxay lahaan doonaan Cortana, laakiin waxaan leenahay Siri oo laga bilaabo maalinta koowaad waa mid aad u faa'iido badan oo dhakhso badan. In badan xitaa xitaa ka badan macruufka, xitaa haddii ay igu adag tahay inaan qirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » Widgets-ka sidoo kale waxaa loo naqshadeeyay MacOS Sierra
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, waan ku faraxsanahay, waxaan haystaa macbook pro retina shaashadda, waxayna u shaqeysaa si ka wanaagsan sidii hore, iyo maareynta diskiga cajiibka ah !!!, sidoo kale aad ayey ugu raaxeysaa jarista iyo dhejinta qalabka kala duwan, maadaama aanan wax dhibaato ah ku qabin IOS 10, aad ayaan ugu faraxsanahay wax walba. Salaan iyo mahadsanid shaqadaada, way ila shaqeysaa aniga, marwalba waxbaan kula bartaa.
Ku jawaab metita
American Express lafteeda ayaa ku dhawaaqday in Apple Pay ay ugu dambeyn ka degi doonto Spain
Maanta Apple Music OneRepublic laga bilaabo 22 pm waqtiga Isbaanishka